Sheekh Adan Madoobe oo la filyo in uu ku soo laabto Nayroobi 13ka bishan iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo isu diyaarinayo in ay dagaal kaga hortagaan qorshaha dowladda guryahooda ku baarayaan dhawaan. Ruunkinet 11/03/07
Sheekh Adan Madoobe oo ay dhawaan guddoomiye u doorteen xildhibaannada ku sugan magaalada Baydhabo ayaa la filayaa in uu ku laabto magaalada Nayroobi 13ka bishan.
Sheekh Adan Madoobe oo dhawaan ka tegay magaalada Nayroobi ayaa la sheegay in uu dib ugu soo laabanayo arrimo la xiriira dhaqaale ay dowladda ka dooneysa UNDP-da Nayroobi.
Dhanka kale, waxaa magaalada Muqdisho isu diyaarinaya maleeshiyaad ay soo abaabuleen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho sidii ay dagaal ugu hortagi lahaayeen ciidamada Itoobiya iyyo kuwa dowladda federaalka ah oo u badan ciidamo laga keenay Puntland oo doonaya in ay xoog ku baaraan dhammaan guryaha ku yaal magaalada Muqdisho.
Warka ayaa i ntaasi ku daraya in maleeshiyaadkan ay is abaabuleen ayagoo aaminsan in qaar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay doonayaan in ay bililiqeystaan waxyaabaha muhiimka ah oo ay ku arkaan guryaha sida dahabka iyo lacagaha.
Ciidamada Itoobiya ee ka soo laabtay gobollada Jubbooyinka, kuwa dowladda ee lagu soo uruuriyay Ballidoogle iyo kuwa madaxtooyada ku sugan ayaa la filayaa in ay dhawaan ka billabaan baaritaan guryaha magaalada Muqdisho ayadoo ay dadka qaar sheegayaan in ay arrintaasi dhaliso dagaal dhexmara labada dhinca ee isaga soo horjeeda Xamar.